Fahafahana Amin'ny Fifampiraharahana Iombonana - Votresalaire.org/Madagascar
Accueil Droit du Travail Syndicats Lalàna Sendikà
Fahafahana mamorona fikambanana sendikà
Ny Lalàm-panorenana sy ny Fehezandalàna momba ny asa maneho ny fahafahana mikambana ary manome alalana ny mpiasa sy ny mpampiasa hiditra ho mpikambana amin'ny sendika (And. 136-7, Fehezandalàna momba ny Asa). Ny Lalàm-panorenana koa manohana ny fahafahana mikambana : "Ny Fanjakana dia manaiky ny zò n'ny mpiasa tsirairay hiaro ny tombotsoany amin'ny alalan'ny hetsika sendikaly, indrindra ny fahalalahana hamorona sendikà. Ny fidirana ho mpikambana sendikà dia malalaka" (And. 31)
Fahafahana amin'ny fifampiraharahana iombonana
Ny Fehezandalàna momba ny asa (And. 173) dia manome alalana ny mpiasa lahy na vavy handray anjara amin'ny fifampiraharahana iombonana amin'ny alalan'ireo solontenany. Ny Lalàm-panorenana dia ahitana andinin-dalàna mitovy amin'izany : "Ny mpiasa tsirairay dia manana zò handray anjara, amin'ny alalan'ireo solontenany, amin'ny famolavolana ny fitsipika sy fepetra iasana" (And. 32)
Ny lalàna dia mankatò ny zò amin'ny fitokonanana izay hamafisin'ny Lalàm-panorenana. Saingy, misy ny lisitra lava dia lava mitanisa ireo servisy manafoana io zò io. "Ny zò hitokona dia ekena raha tsy manohintohina amin'ny fampandehanana ny asam-panjakana na ny tombotsoa ambonin'ny Firenena. Ireo fepetra hafa amin'ny fampiharana io zò io dia voafaritry ny lalàna" (And. 33, Lalàm-panorenana)
Fitsipika mikasika ny zò sendikà
Sotasota Ara-nofo Eo Amin'ny Toeram-pirenena Fitondrana Vohoka sy Asa Asa sy Karama Asa anterivozona / Fanompoana Salaire Minimum
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Lalàna Sendikà